တောင်သမန်က အလွမ်းမင်းသားကြီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » တောင်သမန်က အလွမ်းမင်းသားကြီး
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Mar 13, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 16 comments
1 တောင်သမန်မှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင် ဒီပုံမပါရင် မပြည့်စုံဘူး
2 ယိမ်းနွဲ့ကာ ကနေသလိုဘဲ..............
3 ဒါက ကိုယ်ဟန်ပြပုံတစ်မျိုး
4 အရှေ့ဘက်ကနေရိုက်တာလေ ကျနော်စီးတော်မြင်းလေးလဲရပ်ထားတယ်
6 တံတားကြားက မြင်ရတဲ့ အလွမ်းသစ်ပင်
6 ဦးပိန်ကို တောင်ဘက်ကနေ ဆော်ထည့်လိုက်တာ
7 အလွမ်းသစ်ပင် ကိုယ်ဟန်ပြနေတာကို အနောက်ဖက်ကနေ ဦးပိန်ပါအောင်ရိုက်ထားတာပါ
8 ကိုပေါက်ရဲ့ အမြင်ဒေါင့်စောင်းစောင်းလေး
9 ကျန်ာကတော့ ဒီမှုံဝါးဝါးလေးကို ကြိုက်တယ်
10 တောင်သမန်ကို မနက်စောစောကြွလာတဲ့ ဦးဇင်း
12 အပင်ခြေရင်းမှာေ အးအေးလူလူ စာဖတ်နေတဲ့ ဦးဇင်းတစ်ပါး
14 အနီးကြည့်ကြည့် အဝေးကြည့်ကြည့်
15 အကိုင်းဖျားထက်က ငှက်ကလေး ဘယ်ကိုငေးနေတယ်မသိ
အရင်က တော့ ဟိုးအဝေးမှာရှိတဲ့ဘုရားက။
ဒီတစ်ခါတော့ အနီးကပ် သစ်ပင်ကြီးအောက်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်.။
အရင်ကအဲဒီနားသွားမယ်ကြံရင် လူတွေအမြဲပြည့်နေတော့ မသွားဖြစ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် တစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံ အမြင်နည်းနည်းလေးစီကွာပါတယ်။.
ကြည့်လို့ ကြည်နူးတယ်ဆိုရင်တော့ ကျေနပ်ပါတယ်လို့ပြောရင်
က က က ပေါ့နော်။
ကိုပေါက်လမ်းသလားရင်းလက်ဆော့ တော့ရလာတဲ့ အတွေးပါးပါးလေး
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလို ရေတွေသန့်ရင် အရမ်းကောင်းမှာဘဲ
အခုတော့ မိုးရာသီရောက်ရင် ရေတွေက အရမ်းနံတယ်။
အရင်က အခုလိုနွေခါဆိုရင် ရေနည်းနည်းလေးဘဲကျန်ပြီးတံတားအောက်မှာ ဖုန်တလုံးလုံးနဲ့လှည်းဖြတ်သွားတာကို ပြန်တောင်မြင်ယောင်မိတယ်……………….
ဟုတ်ပလေးပေါက်ရယ် အလွမ်းသစ်ပင်နဲ. လေးပေါက်စီတော်မြင်းလေးနဲ.ဆိုတော့ ပိုပနာရသွားတာပေါ့….
ကျွန်တော် တောင်မရောက်ဖြစ်ဘူးဗျာ.. အားကိုမအားတာ..
အားရှိ KTV မာစွတ် တို့ရောက်နေတာမလား
သစ်ပင်လေး ရိုက်ထားတာ တော်တော်လှတယ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က သစ်ပုတ်ပင်အသေးစားလေးပေ့ါ… ရန်ကုန်က သစ်ပုတ်ပင်ကိုတော့ ပျက်စီးမှာစိုးလို့ ခြံခတ်ထားတယ်…. အခုတော့ ဒီအပင်လေးကို ဘယ်သူမှ ခြံမခတ်ထားသေးဘူး ….. သဘာဝအလှအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲပဲပေ့ါ…. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေး ပေါက်…. နောက်ထူးဆန်းတဲ့နေရာလေးတွေလည်း ရိုက်ပေးဦးနော်……..
တောင်သမန်က အလွမ်းမင်းသားကြီး ဆိုလို့ ကိုပေါက်ကြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုများ ရေးနေတာလားလို့ လက်စသတ်တော့ သာသနာ့ အလံထူထားတဲ့ သစ်ပင်ကြီးကို ပြောတာကိုး အပင်အောက်တောင် ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့လေ … ဒီအပင်မှာကော “ကိုပေါက်ကို သိပ်လွမ်းတယ် ….. နောက်နှစ် တောင်ပြုံးမှာ ပြန်ဆုံမယ် .. မီးလေး” .. ဘာညာ နဲ့ ရေးထားတာလေးတွေကော တွေ့သေးလား
ကိုပေါက် အိမ်မှာ ဖွ လိုက်ရမလား.. တောင်သမန် ထွက်လွမ်းနေတယ် ဆိုပြီး။
အိမ်မှာ ဖွ ပြီးရင်တော့ ပြန်လာ မရှင်းပေးဘူးနော်.. မုန့်ပဲ စားသွားမှာ။
တံတားပေါ်လျှောက်ရင်း လေတဖြူးဖြူးနဲ့၊ သစ်ခြောက်ပင်လေးကလည်းလှ အရင်က ၀ါဆို၊ ၀ါခေါင်ဆိုရင် တောင်သမန်အင်းမှာ ရေတွေနဲ့ဖွေးနေတာ….
ဆူးရေ ကိုကိုသော့ပြော မယုံနဲ့
သွားဖွလို့ကတော့ သတင်းမှားကြီးလာပေးတယ်ဆိုပြီး လာပြောတဲ့သူကို မဒမ်ပေါက်က စိတ်ဆိုးမှာပေါ့.
ရွှေတိုက်စိုး သိပ်မကဲနဲ့ ရွှေစချုပ်လွှတ်လိုက်မှာနော်။
ဆရာကြီးလူထုစိန်ဝင်းကEleven Media Group မှာဆောင်းပါးရေးဘူးတယ်ဗျ…
သူနဲ့ တောင်သမန်အကြောင်းပြောပြီးနောက်တစ်နေ့မှာ ကလျာမဂ္ဂဇင်းက ဆရာမဒေါ်ကလျာက စာလေးတစ်စောင်ရေးပို့လိုက်လို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တောင်သမန်အကြောင်းပဲဖြစ်နေတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဆရာမကစာထဲမှာ မတ်လထုတ် ကလျာကဆရာမရဲ့ ‘ကယ်ကြပါဦး’ ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဖတ်ကြည့်ပြီးတောင် သမန်ကိုဝိုင်းပြီးကယ်ကြပါဦးလို့ တပ်ကူတောင်းထားပါတယ်။ ဆရာမဆီက စာရောက်မလာခင်ကတည်းက ဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီးပါပြီ။ ဖတ်ပြီး တော်တော်စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ တောင်သမန်ဆိုတာ ကိုယ်သံယောဇဉ်ရှိတဲ့နေရာမို့ မဟုတ်ပါဘူး။ နေရာတကာ စီးပွားရေးအဓိကလုပ်နေကြတဲ့လူသားများရဲ့ မိုက်မဲစွာလောဘဇောတိုက်မှုတွေကြောင့် တိုင်းပြည်ရဲ့ ရေမြေတောတောင် သဘာဝတွေမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေ ပျက်စီးချင်တိုင်း ပျက်စီးတာတွေကို တွေးမိလို့ပါ။
အခုတော့ တောင်သမန်လည်း နဂိုရည်ပျက်ယွင်းခဲ့ပြီ။ ကဗျာဆရာ မောင်မြတ်မှိုင်းရေးခဲ့သလို ‘သုံးဖန်လှ’ မဟုတ်တော့ဘူး။ လူသားများရဲ့ အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့မှုကြောင့် အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်သွားပြီ။ ဆရာမဒေါ်ကလျာ မချိတင်ကဲ ရေးထားတာကို ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်။’ယခုအချိန်မှာဖြင့် တောင်သမန်သည် သစ္စာမဲ့ခဲ့ပြီ။ တောင်သမန်ရေတိုးခြင်း၊ ဧရာဝတီဆီအထိရေ ဆင်းခြင်းစသော လည်ပတ်မှုများ လုံးဝမရှိတော့ပါ။ ငါးမွေးမြူရေး လုပ်ရန်အတွက် ရေ၀င်ရေထွက်ခြင်းများကို လုံးဝပိတ်ဆို့ ကာရန်ထားလိုက်ကြခြင်းကြောင့် ရေသေကန်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့ရပါပြီ။ ရေမစီးနိုင်တော့ခြင်းကြောင့် ရှိသမျှအမှိုက်များအားလုံး ဤရေထဲမှာဝင်နေခြင်းကြောင့် ရေညစ်ညမ်းမှုကြီးက ဆိုးသွမ်းလွန်းလှပါဘိ။’
‘ရေသေဖြစ်သွားသည့်အတွက် ဘယ်တုန်းကမှခြင်ထောင်ထောင်၍ မအိပ်ရသော တောင်သမန်အနီးမှ အဆောက်အအုံအားလုံးတွင် ခြင်တွေက သပ်ချလို့ရအောင် ၀ိုင်းဝိုင်းလည်ပြီး လူတစ်ကိုယ်လုံးလည်း ရစရာမရှိအောင် ခြင်ကိုက်ဖုများနှင့် နပမ်းလုံး ခဲ့ရပါသည်’ ဆရာမဒေါ်ကလျာရေးသလိုရေ သေဖြစ်သွားတော့ ရေသိုးနံ့ ညှီစို့စို့ကြီးက အော်ဂလီဆန်စရာကောင်းလှပါတယ်။ ဆရာမဒေါ်ကလျာက နောက်ဆုံးမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေ ဧရာဝတီကို ၀ိုင်းပြီးကယ်တင်ခဲ့ကြသလို တောင်သမန်ကိုလည်း ကယ်ကြပါဦးလို့ ရင်ကွဲနာနဲ့ သံကုန်ဟစ်ထားရှာပါတယ်။
ကဗျာဆရာမောင်မြတ်မှိုင်းတစ်ယောက် သူမြတ်နိုးလှတဲ့ သုံးဖန်လှတောင်သမန်ကို အခုအချိန်မှာ မြင်တွေ့မသွားရတဲ့အတွက် ကံကောင်းသွားတယ်လို့တောင် ဆိုရမလိုပဲ။ ဒါမျိုးတွေကြောင့်ပဲ သေသူကို ရှင်သူက တရတယ် ဆိုတဲ့စကား ဖြစ်ပေါ်လာရတာ ထင်ပါရဲ့။ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာပြီးရောဆိုတဲ့ ကြောင်ဖြူကြောင်မည်း စီးပွားရေးသမားတွေက လောဘဇောတိုက်ပြီး တောင်သမန်ရဲ့ သုံးဖန်လှရဟတ်ကို ဇွတ်အတင်းကြီး ရပ်ပစ်လိုက်ကြပြီလေ။
ကျနော်တို့က ငယ်ကတည်းက မြင်တွေ့နေရတော့ပိုနှမျောတာပေါ့။
အချို့သောသူတွေက ဒီလိုအင်းတွေမှာသဘာဝပြုပြင်မူ့ နဲ့အလိုလိုတာရှည်ခံအောင်ထိန်းပေးထားတယ်ဆိုတာ
အဲတော့ သဘာဝကို ဖျက်လိုက်တော့ အင်းလဲပျက်သွားတာပေါ့။
တစ်နှစ်လုံးငါးမွေး ဖမ်းရောင်း ငွေရ ဒီလောက်ဘဲစဥ်းစားတာလေ.
ဖန် ဆိုတာ အကြိမ်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်လား..
ကျနော်က နဂိုရ်ဂျာနယ်မှာ ပုံနှိပ်ကတည်းက မှားတယ်လို့ ထင်တယ်။
ကျနော်တို့ငယ်ကတည်းက သုံးပန်လှ ရာသီသုံးမျိုးလှသောလို့ မှတ်လာခဲ့တာပါ။
ဒါကြောင့် ကျနော်က သုံးပန်လှလို့ပြင်ပေးတာပါ။
အမှန်ကတော့ ဆရာကြိး လူထုစိန်ဝင်း ဘဲသိမှာပါ။
အလွမ်းမင်းသားကြီး ဆိုတာ ကိုပေါက် က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညွန်းတာ မဟုတ် လို့ တော်သေးရဲ့။
စာဖတ်နေတဲ့ ကိုယ်တော်က မတ်တပ်ကြီး နဲ့ ဖတ်နေတာလား။
အကြိုက်ဆုံး ၅ပုံကို ရွေးရရင်
ပုံလေးတွေ အတွက် ကဇပ။ 8-)
ကျနော်က ပုံကိုဆင်မရိုက် ဘူးရယ်။
အဲတော့ ကျနော်ရိုက်တာ ကိုယ်တော်မသိလိုက်ဘူးလေ.
ကျွန်တော် လုပ်တာနဲ့ပို့ စ်တော့ ပျက်တော့မယ် ကိုပေါက်ရေ။
မန္တလေးမြို့ ဈေးချိုတော် နှစ် (၁၀၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ကနေ စတင်ပြီး ဈေးပွဲတော်တွေ ကျင်းပလာတာ အခုဆို ၈ ကြိမ်မြောက်ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု လာမယ့် ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့မှ ၈ ရက်နေ့အထိ သင်္ကြန်အကြိုကာလမှာ ဈေးရောင်းပွဲတော် တခု ကျင်းပဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။
ဒီဈေးရောင်းပွဲတော်ကို ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ဗဟိုကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးလည်း ဖြစ် အခု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အဖြစ် တာဝန်ယူထားတဲ့ ဦးအောင်သောင်းရဲ့ တပည့်သားရင်းတွေ ထူထောင်ထားတဲ့ ငွေကြယ် သမဝါယမ အသင်းမှ ပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမ အကြိမ် မန္တလေး ဈေးချိုတော် အကျိုးတော်ဆောင်တွေ စီစဉ်တဲ့ အချိန်တုန်းကတော့ ဈေးချိုတော်က ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်နဲ့ မန်းပလာဇာက ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် ဝိုင်းဝန်း လက်မှတ်ထိုး ကန့်ကွက်လိုက်တဲ့ အတွက် ဈေးရောင်းပွဲတော် ပြုလုပ်ဖို့ အစီအစဉ် ခေတ္တ ရပ်တန့်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုအကြိမ် ငွေကြယ်သမဝါယမ အသင်းက စီစဉ်တဲ့ အခါမှာတော့ ဈေးဆိုင်ရှင်တွေကို အသိမပေးဘဲ လာမယ့် ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့မှ ၈ ရက်နေ့အထိ ဈေးပွဲတော် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ် ဆိုပြီး အစိုးရပိုင် သတင်းစာတွေမှာ ထည့်သွင်းကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလို ကြေညာလိုက်တဲ့အပေါ် ဈေးချိုတော် ဈေးဆိုင်ရှင်တွေဘက်က အဆိုပါ ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို မပြုလုပ်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေထံ ထပ်မံ မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆိုလိုက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
‘အခုလို ဈေးပွဲတော် တခုလုပ်တယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ အပြင်မှာ ကောလဟလ ပြောသံကြားတာကတော့ မြို့တော်ဝန်က သိန်းတရာလောက် ရတယ်။ ဌာနမှူးတွေက သိန်းငါးဆယ်လောက် ရတယ်။ အဲလိုမျိုးပြောတယ်။ ဆယ်သိန်းတန် လက်ဆောင်ခြင်းတွေ ဆယ်ခြင်းလောက် ပေးလိုက်လို့ ခွင့်ပြုမိန့် ရတယ်လို့လဲ ကြားတယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ အဲလိုလက်ဆောင်ခြင်းတွေကိုပဲ မကြည့်ပါနဲ့၊ ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ မျက်နှာကိုလဲ ကြည့်ပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။” လို့ ဈေးချိုတော် ဈေးဆိုင်ရှင်တဦးက ဘားမားဗီဂျေ မီဒီယာကို ပြောပါတယ်။
ဈေးချိုတော်မှ ဈေးသူဈေးသားတွေက နှစ်ပေါက်အောင် အခွန်ပေးဆောင်ခဲ့ရပြီး အခုလို သင်္ကြန်နားနီးမှ ဈေးပွဲတော် ပြုလုပ်ပြီး ပွဲတော်အပြီးမှာ ရရှိလာသည့် အကျိုးအမြတ်တွေကို ရန်ပုံငွေအဖြစ် ငွေကြယ် သမဝါယမအသင်းမှ သိမ်းဆည်းယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဈေးသူဈေးသားတွေအတွက် အကျိုးမဖြစ်စေတဲ့အပြင် အဆိုပါဈေးပွဲတော် ပြုလုပ်ရင် ဈေးချိုတော် ဆိုင်ခန်းတွေ အနေနဲ့ ဈေးရောင်းပါးတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မပြုလုပ်ဖို့ ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“အခုလို ဈေးရောင်းကောင်းမယ့်အချိန်ကျမှ ဈေးရှေ့က ပိတ်ပြီးတော့ လာရောက်ရောင်းချတာမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ စည်ပင်က မင်းတို့ကို အရေးစိုက်စရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ လမ်းဆိုတာ ငါ ပိုင်တာ မင်းတို့ပိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ငါ ခွင့်ပြုပေးရင် ရတယ်ဆိုပြီး လုပ်တာမျိုးပါ။ ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်အကုန်လုံးက ဈေးပွဲတော်ကို မပြုလုပ်ဖို့ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်၊ မန္တလေး မြို့တော်ဝန်၊ ဈေးချိုတော် အုပ်ချုပ်ရေးဌာနက ဌာနခွဲမှူး နဲ့ ပွဲကျင်းပစီစဉ်တဲ့သူတွေ ထံသို့ ကန့်ကွက်စာတင်ထားတဲ့ကြားကနေ ပြည်သူလူထုအောက်ခြေက မလုပ်ချင်ရင်နေ၊ ငါတို့က လုပ်ချင်ရင် လုပ်မယ်။ ငါတို့ အာဏာရှိတုန်းကို ငါတို့ လုပ်ချင်တာလုပ်မယ် ဆိုတဲ့သဘောမျိုး ဖြစ်နေတယ်” လို့ ဈေးချိုတော်မှ ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်တဦးက ဘားမားဗီဂျေ မီဒီယာကို ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုပဲ မန်းပလာဇာဘက်က ဈေးဆိုင်ရှင်တဦးကလဲ “ကျနော်တို့က မန်း ပလာဇာဘက်ကပါ။ ဈေးပွဲတော်ကြီးကို မလုပ်ပါနဲ့လို့ တားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဈေးပွဲတော်လုပ်မယ်ဆိုရင်လဲ ဈေးရောင်းကောင်းတဲ့အချိန်၊ လူသိပ်စည်တဲ့ လတွေမှာ မလုပ်ပါနဲ့၊ မစည်ကားတဲ့လတွေမှာ Promotion (အရောင်းမြှင့်တင်ရေး) သဘောမျိုး လုပ်စေချင်တယ်။ လို့ သူ့ရဲ့ သဘောထားအမြင်ကို ပြောပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ ဈေးရောင်းပွဲတော် ဖြစ်မြောက်ရေး စီစဉ်သူတွေဘက်က ဈေးရောင်းပွဲတော် ကျင်းပဖို့ ဆိုင်ခန်းတွေ၊ နေရာထိုင်ခင်းတွေနဲ့ စတိတ်ခ်ျရှိုးတွေ ပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
“သူတို့က ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်းရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ လုပ်တာပါ ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ဒီဈေးချိုတော် ဈေးပွဲတော်ကို သူတို့ကိုယ်ပိုင် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ဘာမှမရှိပဲနဲ့ တခြားကလာပြီး ဈေးပွဲတော်ကို လာလုပ်တယ်။ အခု သူတို့က အကုန်လုံးကို ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီ။ ဆိုင်ခန်းရောင်းဖို့၊ နေရာထိုင်ခင်းတွေနဲ့ စတိတ်ရှိုးတွေ လုပ်ဖို့ ပွဲလဲ ငှားပြီးသွားပြီ။ အခုဟာက လူ တဦးတယောက်လဲ မဟုတ်ဘူး၊ လူ တရာနှစ်ရာလဲ မဟုတ်ဘူး၊ လူ ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ ကန့်ကွက်ထားတာကို လျစ်လျူရှုပြီးတော့ အခုလိုလုပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်”လို့ ဈေးချိုတော်မှ ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်တဦးက သူ့ရဲ့ မကျေနပ်ချက်ကို အခုလို ရင်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
” သမ္မတကြီးကတော့ အောက်ခြေက အသံတွေကို ကြည့်ပါ။ အများရဲ့ဆန္ဒကို ကြည့်ပါလို့ပြောတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ အောက်ခြေအဆင့် ဖြစ်တဲ့ ဈေးအုပ်ချုပ်ရေး ဌာနက ဗိုလ်မှူး သန်းနိုင်ဦးလို ဌာနခွဲမှူး အဆင့်ကတောင်မှ အောက်ခြေကို မကြည့်ပါဘူး။ မြို့တော်ဝန်ဆိုတာကလဲ ဖြစ်နိုင်ရင် လုံးဝကို သူတို့က လျစ်လျူပြီး အရေးကို မစိုက်တဲ့ အနေအထားမျိုးပါ။ ဈေးသူဈေးသားတွေက ကိုယ့်အိတ်ထဲက လာနှိုက်နေတာကို မနှိုက်ပါနဲ့ဗျာဆိုပြီး ရှိခိုးတောင်းပန်နေရသလိုဖြစ်နေပြီ။ ငွေရချင်တာ တခုထဲနဲ့ ဒါမျိုး လုပ်တာတော့ မကောင်းပါဘူး’ လို့ ထပ်မံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မန္တလေး ဈေးချိုတော်မှာ ကျင်းပမယ့် ၈ ကြိမ်မြောက် သင်္ကြန်အကြို ဈေးပွဲတော်ကို မပြုလုပ်ဖို့အတွက် ဈေးချိုတော်နဲ့ မန်းပလာဇာက ဈေးဆိုင်ရှင်တွေ အားလုံး စုပေါင်းပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးထံ မေတ္တာ ရပ်ခံစာ ထပ်မံတင်ပြမှာဖြစ်ပြီး လိုအပ်ရင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသခွင့် တောင်းခံသွားမယ်လို့ ဈေးဆိုင်ရှင်တွေက သူတို့ရဲ့ သဘောထားဆန္ဒကို ထုတ်ဖော်လိုက်ပါတယ်။
By ဇာဏီ၊ မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။